Usekwi-Vuma fm uDkt Khehlelezi - Ilanga News
Home Izindaba Usekwi-Vuma fm uDkt Khehlelezi
Usekwi-Vuma fm uDkt Khehlelezi
USEZOZWAKALA kwiVuma FM uMnu Bhongolwethu Mzozo osenikwe uhlelo lwakhe oluzocacisa ngokuhlangana kwenkolo nesintu.
INGENISA kwiVuma FM inyanga ebike izwakale oKhozini FM ishaya imihlahlo njengoba izoba nohlelo oluzimele kusukela ngo-04h00 kuya ku-05h00 njalo ngo-Lwesibili kuya kuLwesihlanu.
UNkz Lydia Mtshali, ophethe ezokuxhumana kulo msakazo, utshele ILANGA ukuthi uMnu Bhongolwethu “Dkt Khehlelezi” Mzozo, uzoqala ukuzwakala emoyeni kusasa ngoLwesibili.
Uthi uhlelo lwakhe luzobizwa ngeHealing Hour with Dr Kay, kanti inhloso yalo wukukhanyisela abalaleli ngezinto zesintu.
“Sigqugquzela abalaleli bethu ukuba babeke indlebe kulolu hlelo, bashaye izingcingo noma baxhumane nesiteshi ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana.
“Yize sizoba nalolu hlelo esica-banga ukuthi luzobasiza abalaleli bethu, kodwa kumele sikucacise ukuthi uMnu Mzozo kasimqashile njengomunye wabasakazi bethu kodwa uhlelo ngolwakhe, luzimele.
“Noma ngabe yini ekhulunyiwe kulona isiteshi ngeke ukwazi ukusihlawulisa noma ukusibopha,” kusho uNkz Mtshali.
UMnu Mzozo uthi kulolu hlelo uzobe ehlanganisa isintu nenkolo, echazela abalaleli ukuthi lezi zinto kazixabani.
“Abantu abazobe befuna ukucaciselwa ezintweni ezithile bazosizakala, kanti nabafuna ukuthandazelwa sizowenza umkhuleko khona emoyeni.
“Igama lohlelo njengoba lithi Healing Hour, sifisa abantu balapheke, bakhululwe kunoma yiziphi izibopho abanazo.
“Leli thuba lokuba nohlelo lwami kade ngalifisa, ngibonga iVuma FM ngokuthi ekugcineni ize ingiphe leli thuba,” kusho yena.
Previous articleunxesi uthi abaqashi kumele baqinisekise ukuphepha kwezisebenzi
Next articleI-UKZN nethuba lokuhoxa kubafundi